Banaanbax aad u balaaran oo maalinta berri ah ka dhici doonno magaalada Muqdisho (AKHRISO SABABTA) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Banaanbax aad u balaaran oo maalinta berri ah ka dhici doonno magaalada Muqdisho (AKHRISO SABABTA)
Waxaa maalinta berri oo Arbaco ah lagu wadaa in magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya uu ka dhaco banaanbax aad u balaaran ee uu soo qaban-qaabiyay maamulka gobolka Banaadir.
Banaanbaxaasi ayaa sida la sheegay ah mid looga soo horjeedo boobka ay dowladda Kenya ku damacsan tahay inay ku qaadato qeyb ka mid ah Badda Soomaaliya, iyadoona mas’uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka gobolka ay banaanbaxaasi kasoo qeyb-geli doonaan.
Dhinaca kale, maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in banaanbaxaasi uu u dhici doonno si degan, islamarkaana ammaankiisa si aad loo adkeyn doonno.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale (Yuusuf Madaale) oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in banaanbaxaasi ay kasoo qeyb-gali doonaan dadweyne badan oo ka kala imaan doono degmooyinka magaalada Muqdisho.
Wuxuu gudoomiye Madaale sheegay in dadweynahaasi ay muujin doonaan taageeradooda dacwadda u dhaxeeysa Soomaaliya iyo Kenya oo haatan ka socota maxkamadda caalamiga ah ee cadaalada aduunka (ICJ) ee magaalada Hague ee dalka Holland.
Si kastaba ha ahaatee, banaanbaxaan ayaa kusoo beegmaya xilli ay dowladda federaalka Soomaaliya sheegtay inay aad ugu rajo weyn yahay inay ku guuleysato dacwadda ka socota maxkamadda ICJ, iyadoo ay dowladdaha caalamka og yihiin inay Soomaaliya leedahay xuduud-baddeed ugu dheer qaraadda Afrika.